Marko Asɛmpa 14:1-72
Asɔfo bɔɔ pɔw sɛ wobekum Yesu (1, 2)
Ohwiee ngo huamhuam guu Yesu tirim (3-9)
Yuda yii Yesu mae (10, 11)
Twam a etwa to no (12-21)
Awurade Anwummere Aduan no (22-26)
Yesu kae sɛ Petro bɛka sɛ onnim no (27-31)
Yesu kɔbɔɔ mpae wɔ Getsemane (32-42)
Wɔkyeree Yesu (43-52)
Wodii n’asɛm wɔ Sanhedrin no anim (53-65)
Petro kae sɛ onnim Yesu (66-72)
14 Ná aka nnanu ama Twam+ ne Paanoo a Mmɔkaw* Nnim Afahyɛ+ no adu.+ Ná asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no rehwehwɛ nyansakwan bi afa so akyere no akum no;+ 2 na wɔkae sɛ: “Ɛnsɛ sɛ ɛyɛ afahyɛ no ase; anyɛ saa a ɔmanfo no bɛyɛ basabasa.” 3 Na bere a Yesu wɔ Simon kwatani no fi wɔ Betania redidi* no, ɔbea bi de alabasta toa a ngo huamhuam wom bae, nardo ngo huamhuam papa bi a ne bo yɛ den paa. Ɔbɔɔ alabasta toa no, na ofii ase hwiee ngo huamhuam no guu Yesu tirim.+ 4 Ɛnna ebinom bo fuwii, na wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Adɛn nti na wɔasɛe ngo huamhuam yi saa? 5 Anka wobetumi atɔn ngo huamhuam yi agye bɛboro denare* 300 na wɔde sika no ama ahiafo!” Na wɔn bo fuw* ɔbea no paa. 6 Ɛnna Yesu kae sɛ: “Munnyaa no. Adɛn nti na mopɛ sɛ mohaw no? Adepa na wayɛ ama me.+ 7 Ahiafo de, wɔwɔ mo nkyɛn daa,+ na bere biara a mopɛ no, mubetumi ayɛ wɔn papa, na me de, ɛnyɛ daa na mɛwɔ mo nkyɛn.+ 8 Wayɛ nea obetumi; wadi kan ahwie ngo huamhuam agu me ho de asiesie me nipadua ama da a wobesie me.+ 9 Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, baabiara a wɔbɛka asɛmpa no wɔ wiase nyinaa no,+ nea ɔbea yi ayɛ yi nso, wɔbɛka de akae no.”+ 10 Na Yuda Iskariot a ɔyɛ Dumien no mu baako no kɔɔ asɔfo mpanyin no nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a obeyi no ama wɔn.+ 11 Bere a wɔtee no, wɔn ani gyei paa, na wɔhyɛɛ no bɔ sɛ wɔbɛma no dwetɛ sika.+ Enti ofii ase hwehwɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ayi no ama. 12 Na da a edi kan a wodi Paanoo a Mmɔkaw Nnim,+ a wɔde Twam aboa no bɔ afɔre no,+ n’asuafo no bisaa no sɛ: “Ɛhe na wopɛ sɛ yekosiesie ma wo na wudi Twam no?”+ 13 Ɛnna ɔsomaa n’asuafo no mu baanu, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ kurow no mu, na ɔbarima bi a ɔso ahina behyia mo. Munni n’akyi, + 14 na baabiara a ɔbɛkɔ akowura no, mummisa ofiwura no sɛ, ‘Ɔkyerɛkyerɛfo no se: “Ahɔhodan a me ne m’asuafo bedi Twam no wom no, ɛhe na ɛwɔ?”’ 15 Na ɔbɛkyerɛ mo abansoro dan kɛse bi a wɔasiesie mu ayɛ hɔ kama. Monyɛ Twam no ho ntotoe wɔ hɔ mma yɛn.” 16 Na asuafo no siim kɔɔ kurow no mu, na wokohuu nea ɔka kyerɛɛ wɔn no pɛpɛɛpɛ, na wɔyɛɛ Twam no ho ntotoe. 17 Na eduu anwummere no, ɔne Dumien no+ bae. 18 Na bere a wɔtete pon ho redidi no, Yesu kae sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, mo a mo ne me redidi yi mu baako beyi me ama.”+ 19 Wɔn werɛ fii ase howee, na wobisaa no mmaako mmaako sɛ: “Ɛyɛ me anaa?” 20 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛyɛ Dumien no mu baako, nea ɔne me to nsa didi ayowa mu no.+ 21 Na onipa Ba no rekɔ sɛnea wɔakyerɛw afa ne ho no, nanso onipa a wɔnam no so beyi onipa Ba no ama no nnue!+ Saa onipa no, sɛ wɔanwo no mpo a anka eye.”+ 22 Na bere a wogu so redidi no, ɔfaa paanoo hyiraa so, na obubuu mu de maa wɔn, na ɔkae sɛ: “Munnye; eyi gyina hɔ ma me nipadua.”+ 23 Afei ɔfaa kuruwa, na bere a ɔdaa ase no, ɔde maa wɔn, na wɔn nyinaa nom ano.+ 24 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Eyi gyina hɔ ma me ‘mogya+ a wɔde yɛ apam no,’+ nea wobehwie agu ama nnipa bebree+ no. 25 Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, merennom bobesa bio da kosi da a mɛnom no foforo wɔ Onyankopɔn Ahenni mu.” 26 Bere a wɔtoo ayeyi nnwom wiei no, wopue kɔɔ Ngodua Bepɔw* no so.+ 27 Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea ɛbɛba no bɛto mo nyinaa hintidua, efisɛ wɔakyerɛw sɛ: ‘Mɛbɔ oguanhwɛfo no,+ na nguan no abɔ ahwete.’+ 28 Na sɛ wonyan me fi awufo mu a, medi mo anim akɔ Galilea.”+ 29 Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ ɛto wɔn nyinaa hintidua mpo a, me de, ɛrento me hintidua.”+ 30 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ wo sɛ, ɛnnɛ, anadwo yi ara, ansa na akokɔ bɛbɔn mprenu no, na woaka no mprɛnsa sɛ wunnim me.”*+ 31 Nanso Petro kae mpɛn pii sɛ: “Sɛ ɛsɛ sɛ me ne wo wu mpo a, merenka da sɛ minnim wo.”* Wɔn a wɔaka no nyinaa nso kaa saa ara.+ 32 Enti wɔkɔɔ baabi a wɔfrɛ hɔ Getsemane, na ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Montena ha na menkɔbɔ mpae mmra.”+ 33 Na ɔfaa Petro ne Yakobo ne Yohane kaa ne ho,+ na ofii ase yɛɛ basaa paa, na ne ho yeraw no yiye. 34 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Me werɛ ahow* paa+ de rekɔ owu mu. Montena ha, na monkɔ so nwɛn.”+ 35 Bere a ɔkɔɔ n’anim kakra no, obutuw fam, na ofii ase bɔɔ mpae sɛ, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, anka bere* no ntwa ne ho nkɔ. 36 Na ɔkae sɛ: “Abba,* Agya,+ wutumi yɛ ade nyinaa; yi kuruwa yi fi me so. Nanso ɛnyɛ nea mepɛ, na mmom nea wopɛ.”+ 37 Na ɔba behui sɛ wɔadeda, na obisaa Petro sɛ: “Simon, woada? Enti woannya ahoɔden anwɛn dɔnhwerew baako mpo?+ 38 Monkɔ so nwɛn na mommɔ mpae daa, na moankɔ sɔhwɛ mu.+ Honhom no de, ɛpɛ, nanso honam no yɛ mmerɛw.”+ 39 Na ofii hɔ kɔe bio kɔbɔɔ mpae, na ɔkaa asɛm koro no ara.+ 40 Na ɔsan bae behui sɛ wɔadeda, efisɛ na wɔn ani kum paa. Ɛno nti, na wonhu nea wɔnka nkyerɛ no. 41 Na ɔbae ne mprɛnsa so, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Saa bere yi na moada regye mo ahome? Ayɛ yiye! Bere no aso!+ Hwɛ! Wɔreyi onipa Ba no ahyɛ abɔnefo nsa. 42 Monsɔre, momma yɛnkɔ. Hwɛ! Nea obeyi me ama no adu ha awie.”+ 43 Na amonom hɔ ara, bere a ogu so rekasa no, Yuda a ɔyɛ Dumien no mu baako no bae, na na nnipadɔm bi a wofi asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo ne mpanyimfo no nkyɛn a wokurakura sekan ne nkontimmaa* ka ne ho.+ 44 Ná nea obeyi no ama no ama wɔn sɛnkyerɛnne bi dedaw sɛ: “Onipa a mefew n’ano no, ɔne no; monkyere no na monhwɛ no so yiye mfa no nkɔ.” 45 Na ɔkɔɔ Yesu nkyɛn tẽẽ, na ɔbɛn no kae sɛ, “Rabi!” Ɛnna ofew n’ano. 46 Na wosoo no mu kyeree no kɔe. 47 Nanso wɔn a wogyinagyina hɔ no mu baako twee ne sekan, na ɔde twaa ɔsɔfo panyin no akoa aso fii hɔ.+ 48 Ɛnna Yesu bisaa wɔn sɛ: “Mode sekan ne nkontimmaa* aba rebɛkyere me te sɛ ɔkorɔmfo werɛmfo?+ 49 Ná me ne mo wɔ asɔrefi hɔ a mekyerɛkyerɛ daa,+ nso moankyere me. Nanso aba saa na ama Kyerɛwnsɛm no aba mu.”+ 50 Na asuafo no nyinaa gyaw no hɔ guanee.+ 51 Na aberante bi a ofura nwera pa de akata n’adagyaw so fii ase dii n’akyi, na wɔyɛe sɛ wɔrekyere no, 52 nanso ogyaw ne ntama no hɔ, na ɔde adagyaw guan kɔe.* 53 Afei wɔde Yesu kɔmaa ɔsɔfo panyin no,+ na asɔfo mpanyin ne mpanyimfo ne akyerɛwfo no nyinaa behyiae.+ 54 Na Petro dii n’akyi wɔ akyirikyiri koduu ɔsɔfo panyin no adiwo;* na ɔne ofie hɔ asomfo no tenaa ogya ho toe.+ 55 Ná asɔfo mpanyin ne Sanhedrin no nyinaa rehwehwɛ adanse bi atia Yesu, na ama wɔagyina so akum no, nanso na wonnya bi.+ 56 Nokwarem no, nnipa bebree dii adanse a ɛnyɛ nokware tiaa no,+ nanso na wɔn adanse no nhyia. 57 Afei nso, ebinom sɔre dii adanse a ɛnyɛ nokware tiaa no sɛ: 58 “Yɛtee sɛ ɔreka sɛ, ‘Medwiriw asɔrefi a wɔde nsa sii yi agu, na mede nnansa besi foforo a wɔamfa nsa ansi.’”+ 59 Ɛno ho mpo, wɔn adanse no anhyia. 60 Afei ɔsɔfo panyin no sɔre gyinaa wɔn mfinimfini, na obisaa Yesu sɛ: “Wonka biribiara nyi w’ano? Enti nea nnipa yi reka atia wo yi, wonte?”+ 61 Nanso ɔyɛɛ dinn, na wamma mmuae biara.+ Afei ɔsɔfo panyin no fii ase bisaa no asɛm bio. Obisaa no sɛ: “Wone Kristo no, Nea Wɔahyira No no Ba no anaa?” 62 Na Yesu kae sɛ: “Mene no; na mubehu onipa Ba no+ sɛ ɔte Otumfo* no nsa nifa so+ na ofi ɔsoro mununkum mu reba.”+ 63 Ɛnna ɔsɔfo panyin no suan n’ataade mu, na ɔkae sɛ: “Adansefo bɛn bio na yehia?+ 64 Moate abususɛm no. Mudwen ho dɛn?”* Wɔn nyinaa buu no fɔ sɛ, ɛsɛ sɛ owu.+ 65 Na ebinom fii ase tetew ntasu guu no so,+ na wɔkataa n’ani bobɔɔ no akuturuku, na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wuse woyɛ odiyifo a, kyerɛ yɛn nea ɔbɔɔ wo!” Na asɛnnibea awɛmfo* no bobɔɔ n’ani so faa no kɔe.+ 66 Bere a Petro wɔ ase hɔ wɔ adiwo hɔ no, ɔsɔfo panyin no mmaawa no mu baako bae.+ 67 Na bere a ohui sɛ Petro reto gya no, ɔhwɛɛ no hãã, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nso, na woka saa Nasaretni Yesu yi ho.” 68 Nanso wannye antom, na ɔkae sɛ: “Minnim no, na nea woreka yi nso, mente ase.” Ɛnna Petro pue kɔɔ ofi no kwan ano.* 69 Ɛhɔ nso, abaawa no huu no, na ofii ase ka kyerɛɛ wɔn a wogyinagyina hɔ no bio sɛ: “Oyi ka wɔn ho.” 70 Saa bere yi nso, wannye antom. Na ɛyɛɛ kakra no, wɔn a wogyinagyina hɔ no fii ase ka kyerɛɛ Petro bio sɛ: “Ampa woka wɔn ho. Nokwasɛm ne sɛ, woyɛ Galileani.” 71 Na ofii ase dii nsew kaa ntam sɛ: “Minnim onipa yi a moreka ne ho asɛm no!” 72 Na ɛhɔ ara na akokɔ bɔnee ne mprenu so;+ na Petro kaee asɛm a Yesu ka kyerɛɛ no no sɛ: “Ansa na akokɔ bɛbɔn mprenu no, na woaka no mprɛnsa sɛ wunnim me.”*+ Ne werɛ howee, na ofii ase sui.
^ Anaa “na ɔte adidipon ho.”
^ Anaa “wɔde abufuw kasa kyerɛɛ no; wɔkaa n’anim.”
^ Anaa “na oguan kɔe a na ɔnhyɛ ataade papa biara; na oguan kɔe a nea ɔde hyɛ n’ataade ase nko ara na ɛhyɛ no.”
^ Anaa “Mo gyinaesi ne dɛn?”
^ Anaa “asomfo.”